GarageBand, Apple Support iyo TV Remote ayaa la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaadaan macruufka 12 | Wararka IPhone
GarageBand, Apple Support iyo TV Remote ayaa la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaadaan macruufka 12
Sida caadiga ah, ragga ka socda Cupertino, mar alla markii ay sii daayaan nooca ugu dambeeya ee nidaamka cusub ee hawlgalka, waxay bilaabaan inay cusbooneysii codsiyada ay u heli karto dhammaan isticmaaleyaasha ka yimid Apple. Waqtigan xaadirka ah, waxay umuuqataa in shirkadu ay ku socoto xawaare wanaagsan waxayna umuuqataa inaysan qorsheyneynin inay wax uun uga harto dhuunta, sida dhacday sanado kale.
Shalay waxaan kugu wargalinay cusbooneysiinta xafiiska iWork ee iOS, nooca macOS sidoo kale waa la cusbooneysiiyay. Maanta waxaa la joogaa GarabeBand, Apple Support iyo Apple TV Remote. Cusboonaysiinta ugu weyn ee aan ka helno cusboonaysiintaan ayaa la xiriirta cabirka shaashadda cusub ee iPhone XS Max. Laakiin iyagu ma ahan wararka kaliya.
1 Faransiiska Apple Remote
3 Taageerada Apple
Wehelka ugu fiican Apple TV, waa la cusbooneysiiyay isagoo ku daray taageerada tirada shaashadaha cusub marka lagu daro noo oggolaanshaha si ammaan ah u buuxi ereyada sirta ah ee ku keydsan aaladaha iOS si loo helo barnaamijyada Apple TV ee u baahan xaqiijinta. Waxyaabo kale oo cusub ayaa ah in codsigan si otomaatig ah loogu dari doono xarunta kontoroolka aaladda, taas oo noo oggolaan doonta inaan ku helno TV-ga Apple-ka farriin la tirtiro
Cusboonaysiintii ugu dambaysay ee GarageBand One Drummer's Complete Collection of Touch Instruments iyo Apple Loops, taas oo noo oggolaan doonta inaan sii wadno qaabeynta codka iyo waxqabadka kadib markii aan ku darno mashruuca. Waxa kale oo lagu daray taageerada MIDI soo dejinta faylka iyo dib u ciyaarista.
Cusbooneysiinta aan toos ugala xiriiri karno Apple taleefannadeena iPhone, iPad ama iPod taabashada waxay na siineysaa hanaan cusub oo la fududeeyay dib ugu celi lambarka sirta ah ee Apple ID hab ka dhaqso iyo ammaan badan, in haddii aan ku sameyno bogga internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » GarageBand, Apple Support iyo TV Remote ayaa la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaadaan macruufka 12